Android मा भाइरस कसरी हटाउने: सबै तरिकाहरू | ग्याजेट समाचार
Android मा भाइरस कसरी हटाउने
ईडर एस्टेबान | | मोबाईलहरू, ट्यूटोरियलहरू
अवसरमा, एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको फोन कसरी भाइरस वा मालवेयर द्वारा संक्रमित छ भनेर हेर्न सक्दछ। यो यस्तो चीज हो जुन धेरै कष्टकर छ, किनकि यसले उपकरणको अपरेसनलाई सीधा असर गर्छ। किनकी तपाईले फोनमा भाइरस भएको पत्ता लगाउन सक्दछौं किनकि उपकरणमा नराम्रो कार्य सुरु भएको छ वा केहि कार्यहरू गर्नुपर्दछ जुन यसमा सामान्य छैन।
हामी यी अवसरहरूमा के गर्न सक्छौं? महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो फोनमा भाइरस हटाउन अगाडि बढ्नुहोस्। एन्ड्रोइडमा केहि तरिकाहरू छन् जुन फोनबाट भाइरस हटाउन सकिन्छ। यसैले प्रयोगकर्ताहरूका लागि यस सम्बन्धमा रहेको सम्भावनाहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
1 कसरी भाइरस एन्ड्रोइड मा लुक्छ?
2 एन्ड्रोइडबाट भाइरस कसरी हटाउने
2.1 अनुप्रयोग हटाउनुहोस्
2.3 सुरक्षित मोडमा सुरू गर्नुहोस्
2.4 कारखाना पुनर्स्थापना
कसरी भाइरस एन्ड्रोइड मा लुक्छ?
यो सम्भवतः धेरै प्रयोगकर्ताहरूले पाएको मुख्य शंकाहरू मध्ये एक हो। सब भन्दा साधारण यो हो एक अनुप्रयोग डाउनलोड भएको छ जब एक भाइरस मा crept छ. यो प्राय: जसो बाटो हो जसमा भाइरसले एन्ड्रोइडमा आफ्नो प्रविष्टि गर्न प्रबन्ध गर्दछ। तिनीहरू अनुप्रयोगहरू हुन सक्छन् जुन गुगल प्लेमा थियो। कहिलेकाँही त्यस्ता अनुप्रयोगहरू छन् जुन स्टोरमा रहेका सबै सुरक्षा नियन्त्रणहरूलाई बाइपास गर्न प्रबन्ध गर्दछ।
यद्यपि यो पनि हुन सक्छ अनुप्रयोगहरू वैकल्पिक स्टोरहरूबाट डाउनलोड गरिएको छ। गुगल प्ले बाहेक अरु धेरै स्टोरहरु छन्। तिनीहरूमा तपाईं एन्ड्रोइडका लागि अनुप्रयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन धेरै केसहरूमा गुगल प्लेमा प्राप्त गर्न सम्भव छैन। तिनीहरू प्राय: APK ढाँचामा हुन्छन्, जसले यी केसहरूमा केही समस्याहरू प्रस्तुत गर्न सक्दछ। किनभने यी धेरै स्टोरहरूमा सुरक्षा छैन जुन आधिकारिक स्टोरमा छ। त्यसोभए यो सम्भव छ कि भाइरस वा मालवेयर यसमा स्नीक हुन्छ।
यो हुन सक्छ कि अनुप्रयोग आफैंमा भाइरसको साथ एक हो। अन्य अवस्थामा, कार्य गर्न फोनमा अनुमतिहरूको फाइदा लिनुहोस्। त्यसकारण, जब कुनै एन्ड्रोइड फोनमा अनुप्रयोग स्थापना हुन्छ, यसको अनुमतिहरू जहिले पनि जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ। फ्ल्यासलाइट अनुप्रयोगको लागि तपाईलाई माइक्रोफोन वा सम्पर्कहरूको पहुँचको लागि सोध्नु सामान्य कुरा होईन, उदाहरणका लागि।
एन्ड्रोइडबाट भाइरस कसरी हटाउने
यदि फोनमा केही असामान्य कुरा पत्ता लाग्यो भने, यो नराम्रो रूपमा काम गर्दछ (यो बन्द हुन्छ वा प्राय: क्र्यास हुन्छ), यो सामान्य भन्दा धेरै ढिलो काम गर्दछ, वा अचानक तपाईंले स्थापना गर्नुभएको अनुप्रयोग देख्नुभयो, फोनमा त्यहाँ भाइरस छ भन्ने शंका गर्न यो समय आइसकेको छ। यस अवस्थामा तपाईले एन्ड्रोइडमा क्रमिक कार्यहरू गर्नुपर्दछ, जुन समस्या सुधार्न र प्रश्नमा भाइरसलाई बिदाइ दिन।
हामीले भनेझैँ, भाइरसको लागि एन्ड्रोइडमा लुक्नको लागि सबै भन्दा साधारण तरीका यो संक्रमित अनुप्रयोग मार्फत हो। त्यसकारण, यदि तपाईंले यो अनुप्रयोग स्थापना गरिसके पछि फोनमा खराबी भएको याद गर्नुभयो भने, यो समस्याको स्रोत हुन सक्छ। त्यसोभए तपाईंले के गर्नुपर्दछ त्यो अनुप्रयोग मेट्नुहोस्। धेरै जसो अवस्थामा यसले फोनलाई फेरि राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्दछ। जहाँसम्म, यसले तपाईंलाई मेटाउन नदिन सक्छ।
केहि दुर्भावपुर्ण अनुप्रयोगहरु प्रशासक अनुमति को लागी सोध्छन्, त्यसो भए पछि तिनीहरूलाई मेटाउन सम्भव छैन। तर त्यहाँ सधैं यो समस्याको समाधान छ। तपाईंले एन्ड्रोइड सेटिंग्स प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि सुरक्षा सेक्सनमा। त्यहाँ एक सेक्सन छ जुन "उपकरण प्रशासकहरू" हो। यदि यो यसमा छैन भने, यो अन्य सेटि inहरूमा हुन सक्छ। तपाईंको फोनको ब्रान्डमा निर्भर गर्दै नाम पनि भिन्न हुन सक्छ।
यो सेक्सनले तपाइँलाई व्यवस्थापक पहुँच भएको अनुप्रयोगहरू छन् कि छैन भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ। यदि त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन जुन हामी त्यहाँ हुनु हुँदैन। त्यसकारण हामी यसलाई निस्क्रिय पार्छौं। यसरी, तपाईं यो अनुप्रयोग एन्ड्रोइडबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। के भने भाइरसको साथ समाप्त हुन्छ। कसरी विस्तारमा हेरौं एन्ड्रोइडमा भाइरस हटाउनुहोस्.
एन्ड्रोइडमा एन्टिभाइरस भएका प्रयोगकर्ताहरूका लागि, यो सफ्टवेयरको साथ उनीहरूलाई हटाउन सम्भव छ। एकातिर, हामीसँग प्ले प्रोटेक्ट छ जुन एन्ड्रोइड फोनहरूमा आउँदछ, जुन अक्सर मालवेयरको विरूद्ध झगडा गर्दछ। तर यदि तपाईंसँग कुनै अन्य एन्टिभाइरस स्थापना गरिएको छ भने, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र फोनमा भएको भाइरसलाई यसरी हटाउनुहुनेछ। तपाईको स्मार्टफोनमा क्राइप भएको कुनै पनि भाइरसलाई मार्ने यो अर्को सजिलो तरीका हुन सक्छ।
सुरक्षित मोडमा सुरू गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनबाट अनुप्रयोग हटाउन सक्षम हुनु भएको छैन भने, त्यसोभए तपाईंले अन्य तरिकाहरू खोज्नुपर्नेछ। समस्याहरू अन्त्य गर्ने तरिका सुरक्षित मोडमा फोन सुरू गर्नु हो। सुरक्षित मोडमा एन्ड्रोइड सुरू गर्नाले तपाईंलाई फोनलाई सीमित रूपमा बुट गर्न अनुमति दिन्छ, सुरक्षा वातावरणमा जसले भाइरसलाई कार्य गर्न सक्षम हुन रोक्दछ। यस तरीकाबाट, यो फोनमा रहेको भाइरस पत्ता लगाउन र यसलाई सरल तरीकाले हटाउन सम्भव हुनेछ।
सामान्य कुरा यो हो कि एन्ड्रोइड फोनको सेटिंग्स भित्र हामीसँग यो बुट सुरक्षित मोडमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। धेरै केसहरूमा, मात्र केहि सेकेन्डको लागि पावर बटन थिच्नुहोस्, सुरक्षित बुट मोड बाहिर निस्के सम्म। केही स्मार्टफोन निर्माताहरूले यसलाई आपतकालिन मोड भन्छन्, यो प्रत्येक ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ।
तेस्रो समाधान, यद्यपि केही अधिक चरम, कारखाना पुनर्स्थापना हो। यो केहि गर्ने छ यदि भाइरस हटाउन सकिदैन। साथै, यदि हटाइएको भए पनि, यसले एन्ड्रोइडले राम्रोसँग काम गर्दैन भनेर देखाउँदछ। यो मानिन्छ कि फोनमा सबै डाटा पूर्ण रूपमा मेट्नु पर्छ। यसमा रहेका सबै फोटोहरू, अनुप्रयोगहरू वा कागजातहरू स्थायी रूपमा हराउनेछन्। तसर्थ, यसलाई हरपट्टि हटाउनु अघि जहिले पनि सबै चीजको ब्याकअप प्रतिलिपि राख्नु राम्रो हुन्छ।
यो एन्ड्रोइड मा विभिन्न तरिकामा कारखाना पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। धेरै मोडेलहरूमा यो सेटिंग्स भित्रबाट गर्न सम्भव छ। त्यहाँ सामान्यतया यसलाई भित्र पुन: भण्डारण गर्न को लागी एक सेक्सन छ। यद्यपि सबै ब्रान्डले यस प्रणालीको उपयोग गर्दैन। फोन बन्द गर्न पनि सम्भव छ। त्यसो भए, पावर बटन र भोल्युम अप बटन (वा फोनमा निर्भर भोल्यूम) केही सेकेन्डको लागि थिच्नुहोस्। जब सम्म रिकभरी मेनू आउँदैन।
यसमा त्यहाँ विकल्पहरूको श्रृंखला छ, जुन मध्ये एक कारखाना रिसेट हो। त्यसैले भोल्युम अप र डाउन बटन प्रयोग गरेर, तपाईं त्यो विकल्पमा पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए तपाईले त्यसलाई पावर बटनले थिच्नु पर्छ। हामी त्यसपछि फ्याक्ट्री फोन पुनर्स्थापना गर्न अगाडि बढ्छौं। यसरी, हाम्रो Android स्मार्टफोन यसको मूल राज्यमा फर्कन्छ, यो कारखाना छोडे जस्तै। भाइरस नभएको।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » Android मा भाइरस कसरी हटाउने
Sonos यस दोस्रो जेनेरेशनमा Sonos One को कम्पोनेन्टहरू सुधार गर्दछ